2021 အတွက် အမိုက်စား ပုံစံနဲ့ ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ Toyota Yaris GR Rally ကား ! – MyMedia Myanmar
2021 အတွက် အမိုက်စား ပုံစံနဲ့ ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ Toyota Yaris GR Rally ကား !
ဘယ်တော့ မဆို အကောင်းဆုံးကိုပဲ မျှော်လင့်တတ်ကြတဲ့ သဘာဝကြောင့်ပဲ ဘာကြောင့် အကောင်းဆုံး ကို မရသေးတာလဲ လို့ စဉ်းစားနေ မိမှာပါ။ Toyota Yaris အမျိုးအစားဟာဆိုရင် အခု 2021 Model Year အတွက် အမေရိကမှာ ဆက်လက် မရရှိနိုင် တော့ဘူးလို့ သိထား ရပြီး အဲ့ဒီ အဓိပ္ပါယ် ကတော့ လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၀ စုနှစ် တစ်ခုအတွက် အကောင်းဆုံးသော Hot Hatch တစ်စီးကို လွမ်းနေရတော့မယ် ဆိုတဲ့ သဘောပါပဲ။ Yaris GR ဟာ ဆိုရင် လမ်းမထက်မှာ မောင်းနှင် နိုင်တဲ့ ကားတွေထဲ Homologation ရဲ့ အချက်အလက် တွေနဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ Rally Racer ကား တစ်စီး ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် မရေမတွက် နိုင်တဲ့ Video တွေ အများစုထဲမှာလည်း အဆိုပါ ကားလေးဟာ ထင်မထား လောက်အောင်ကို မြန်ဆန် နေတာကို တွေ့ရကာ နိုင်ငံတကာ Rally Circuit တွေထက်ကို စွမ်းဆောင် နိုင်တယ်ဆိုတာ အမြဲ သက်သေပြ ချက်ရှိနေတာပါ။ အခုလိုမျိုး ဂုဏ်သိက္ခာ မြင့်မြင့်နဲ့ အထင်ကြီး လေးစားလောက်စရာ စွမ်းဆောင်ရည် မျိုးကို ဆက်လက် ထိန်းသိမ်းနိုင်ဖို့ အတွက် Toyota Gazoo Racing ကနေ အဆိုပါ ကားအတွက် ပုံစံအသစ် တစ်ခုကို ချပြ ပေးလိုက်ပါပြီ။
အထူးသဖြင့်တော့ ပြိုင်ကား ရာသီသစ် အတွက်ပြင်ဆင်တဲ့ သဘောဖြစ်ကာ သေသေချာချာ ကြည့်ပြီး ဝန်ခံရမယ် ဆိုရင်တော့ တကယ့်ကို ထူးခြား ကောင်းမွန် လှတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ အခု မြင်တွေ့ရတဲ့ ကားရဲ့ ပုံစံ အသစ်ကတော့ FIA World Endurance Championship ပြိုင်ပွဲတုန်းက GR 010 Hypercar ကိုတောင် အမှတ်ရသွား စေလောက်အောင် ခပ်ဆင်ဆင် ဖြစ်နေတာတွေ့ရပြီး Pikes Peak Racer တစ်စီး အနေနဲ့ ထူးခြားနေစေမယ့် Aero Work တွေကိုလည်း ထပ်မံ ထည့်သွင်း ပေးထားတာကို မြင်ရဦးမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ လမ်းပေါ်မှာ မောင်းနှင်ရမယ့် ကား အမျိုး အစား ရဲ့ အရောင်မှာကိုက Colour Scheme တွေကို ထည့်သွင်း ပေးထားတာကြောင့် Gazoo Racing ဟာ သူတို့ရဲ့ ပြိုင်ပွဲနဲ့ သာမန် လမ်းမထက်ကကားတို့ အကြား မှာ အမြဲ လိုလို ချိတ်ဆက် မှု ကောင်း တစ်ရပ်ကို ထားရှိ လိုတဲ့ သဘော ကိုလည်း မြင်တွေ့နိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါ Glitz lies တွေ ရဲ့အောက်မှာတော့ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် Platform တစ်ခုကို ကြိုးစားတည်ဆောက်ထားတာ တွေ့ရမှာဖြစ်ပြီး ၅ ရာသီ ဆက်တိုက် အကောင်းဆုံး စွမ်းဆောင် ထားနိုင်တဲ့ Platform လည်း ဖြစ်လို့ နေပြန်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဆိုပါ ကား အနေနဲ့ လက်ရှိ ပုံစံနဲ့ ပြိုင်ပွဲ ကိုဝင်ရောက် ယှဉ် ပြိုင်တာ နောက်ဆုံး အကြိမ် ဖြစ်လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ လာမယ့် ၂၀၂၂ ပြိုင်ပွဲ ကစလို့ နည်းပညာ ပိုင်းဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း ကန့်သတ် ချက်အချို့ကို ထည့်သွင်း ပေးလာတော့မှာ မို့ပါပဲ။
အဆိုပါ ကားအမျိုးအစားကတော့ WRC ပြိုင်ပွဲ တစ်လျှောက်မှာ နာမည်ရထားပြီးသားဖြစ်ကာစွမ်းဆောင်ရည် အားဖြင့်လည်း အောင်မြင် မှုကို ၁၇ ကြိမ်တိုင်တိုင် ဆွတ်ခူးထားနိုင်ပြီး Stage Wins အဆင့်မှာ လည်း ၃၂၂ ကြိမ် တိုင်အောင် အနိုင်ယူထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် Toyota အနေနဲ့ က 2019 နဲ့ 2020 ပြိုင်ပွဲတို့မှာ ဒရိုင်ဘာ နဲ့ အကူ ဒရိုင်ဘာ တို့ အတွက် Back-To-Back Wins တွေကိုလည်း အနိုင်ရ အောင် စီမံ နိုင်ခဲ့ပါသေးတယ်။ အခုလို မျိုးရာသီသစ် အတွက် ကားကို ပြန်လည် ပြင်ဆင် နိုင်ဖို့ ဖန်တီး ပြုလုပ် နေတဲ့အချိန်မှာ အီတလီရဲ့ နာမည်ကြီး တာယာ ကုမ္ပဏီ Pirelli ကလည်း WRC ပြိုင်ပွဲ အတွက် တစ်ခုတည်းသော တာယာအထောက်အပံ့ ကုမ္ပဏီ ဖြစ်လာခဲ့ပါ တယ်။ ဒါကြောင်မို့လို့ တကယ့်ကို စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းတဲ့ ပြိုင်ပွဲတစ်ရပ် အဖြစ် ကူးပြောင်းလာခဲ့ပါပြီ။ အဆိုပါ WRC ရာသီသစ် ကတော့ အခု လာမယ့် ဇန်နဝါရီလ ၂၁ ရက်က စတင်ကာ Rallye Monte-Carlo မှာ စတင် ကျင်းပသွားတော့မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
The post 2021 အတွက် အမိုက်စား ပုံစံနဲ့ ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ Toyota Yaris GR Rally ကား ! appeared first on MyCars Myanmar.
MyMedia Myanmar2021-01-18T13:00:59+06:30January 18th, 2021|MYCARS MYANMAR|